कालो जैतुन र काजू को तरकारी प्याट | ThermoRecines
एपेटाइजरहरू1 मिनेट4 व्यक्ति175२ क्यालोरी
हामी हाम्रो तालिका पूरा गर्न जारी राख्छौं तरकारी प्याट। अल गाजर pate र बीट जुन हामीले हालसालै प्रकाशित गरेका थियौं जैतून कालो र anarcados। सबै तीन जनाले आकर्षक स्ट्राईक रंग चार्टमा स्वादहरूको एक स्वादिष्ट कन्ट्रास्ट प्रस्ताव गर्दछ। यदि तपाईं थप थप्न चाहानुहुन्छ भने म स्वादिष्ट प्रस्ताव गर्दछु मुहम्मारा वा हाम्रो कुनै पनि hummus.
पूर्व जैतुन पाटे एक संस्करण हो शाकाहारी प्रख्यातबाट टेपेनेड फ्रेन्च। तपाइँ यसलाई सलादमा भिनाग्रेटको साथ मिलाएर, वा पास्ता डिशमा अन्तिम टचको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो धेरै सजिलो र धेरै छिटो हो। तपाईं मनपराउनुहुनेछ।
1 कालो जैतुन र काजू पाटे
१ g० ग्राम पिट्टे कालो जैतुनहरू
G० ग्राम काजू
२ चम्मच जैतुनको तेल
हामी गिलासमा सबै सामग्रीहरू परिचय गर्दछौं र क्रुशको बेलामा Seconds सेकेन्ड गतिमा।
हामी भित्ताहरूको भग्नावशेषहरू कम गर्छौं र फेरि कुचिरहन्छौं Seconds सेकेन्ड गतिमा।
तिनीहरू लगभग २०० g pate बाहिर आउँछन्, 200 व्यक्तिको लागि राम्रो रकम। तर यदि तपाइँ यसलाई अन्य प्याटहरूसँग मिलाउन लाग्नुभएको छ र यो अत्यधिक हो भने, तपाईंले आधा भागहरूलाई विभाजन गर्न सक्नुहुनेछ, समय र गतिको हिसाबले नुस्खा ठीक त्यस्तै राख्दै।
यसको स्वाद एकदम लसुन जस्तो छ। यदि तपाईंलाई यो धेरै मनपर्दैन भने, यसलाई हटाउनुहोस् वा साथै रकम पनि कम गर्नुहोस्।
मलाई काजूको टुक्राहरू भेट्न मन छ, तर यदि तपाईं एक क्रीमियर बनावट चाहानुहुन्छ भने, अन्तिम चरणमा 50० मिलि (आधा गिलास) पानी (यदि यो जैतुनको पानी छ भने) राम्रो थप्नुहोस्।
थप जानकारी - गाजर प्याटे, बीट र अखरोट तरकारी पाटे, मुहम्मारा, Hummus
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » थर्मोमिक्स रेसिपीहरू » एपेटाइजरहरू » कालो जैतुन र काजू पाटे
एक अद्भुत pate !! मैले यो साथीहरूसँग खाना खान बाध्य पारें र उनीहरू यो पेटेको स्वादले रमाए। मेरो स्वाद को लागी tapenade भन्दा धेरै राम्रो छ ... धेरै धेरै धन्यवाद !!
धन्यवाद पीटर! मैले यो पहिलो पटक हाम्रो पुस्तकमा एक नुस्खाका लागि गरे, शाकाहारी पाठ्यक्रम: pate with avocados। तिनीहरू avocados चार तरकारी patés भरिएका छन् कि पकवान र color र स्वाद दिन्छ ... Mmmmhh ... मलाई लाग्छ कि यो क्रिसमस खस्ने छ। अंगालो!